परदेशी श्रीमान र स्वदेशकी श्रीमतीको यथार्थ मनोभाव उनिएको मार्मिक गीत ‘भन साईंला’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
परदेशी श्रीमान र स्वदेशकी श्रीमतीको यथार्थ मनोभाव उनिएको मार्मिक गीत ‘भन साईंला’
काठमाडौं । अधिकांश नेपालीको साझा समस्या भनौं या बाध्यता विदेशीनु निर्बिकल्प नै बनेको छ । ४० कटेसी रमाउने सुखद भविष्यको कल्पना गर्दै, विदेशीएका परदेशीहरुको जिवन भने आफैंमा दुःखद बितिरहेको हुन्छ । एकातिर मातृभुमी र परिवारबाटा टाढा अर्कोतिर बिरानो मुलुक, चिनारु कोही हुँदैन । यता स्वदेशमा रहेका परिवारमा पनि उतिकै पीडा र कुण्ठा । अझ श्रीमान परदेशीएपछि एउटी श्रीमतीले कतिसम्म भोग्नु र सुन्नुपर्छ अरु कसैले कहाँ लेख्न, सुन्न र भन्न सक्ला र ? यहि यथार्थ मनोभावलाई उन्दै लोकप्रिय गायक रमेशराज भट्टराईले मर्मश्पर्शी गीत ‘भन साईंला’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
पछिल्लो पुस्ताकी लोकप्रिय गायिका रचना रिमालले भट्टराईलाई स्वरमा साथ दिएकी छिन् । रमेशराजकै रचना र संगीत रहेको गीतलाई विश्वास नेपालले संगीत संयोजन गरेका हुन् । गीतलाई रमेशराज भट्टराई युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
शंकर बिसीको निर्देशनमा तयार भएको गीतको भिडियोमा परदेशी श्रीमान र स्वदेशमा रहेकी श्रीमतीको मनोभावलाई दुरुस्त देखाइएको छ । निर्देशक बिसीले सुखद भविष्यको कल्पनामा परदेशीएका श्रीमान र उनकी श्रीमतीको मनको भावनालाई टपक्क टिपेर भिडियोमा देखाउन सफल भएका छन् ।
भिडियोमा जिवन भट्टराई, लक्ष्मी बर्देवा, संगम भण्डारी र सन्तोष पन्तले अभिनय गरेका छन् । दुर्गा पौडेलले छायांकन गरेको म्यूजिक भिडियोलाई नविन घर्ति मगरले सम्पादन गरेका हुन् ।